Sida loogu sawiro ubaxyo qurxoon seddex tallaabo sida uu sheegayo farshaxaniste Kuuriya | Abuurista khadka tooska ah
Farshaxanistaha reer Kuuriya ayaa talaabo talaabo u baraya sida loo sawiro ubaxyo qurxoon
El sawiridda ubaxyadaas ku jira biyo-biyoodka ayaa leh taas, laakiin haddii ay ku baraan sida loo raaco dhowr tallaabo oo aad awoodi kartid inaad ku rinjiyeysid, dhammaantood waa ka wanaagsan yihiin. Tani waa waxa ay sameyso fanaanadan reer Kuuriya ee qaadata qalinkeeda iyo burushkeeda si ay u muujiso tillaabooyinka ay qaadayso si ay u soo jiitaan ubaxyadan qurxoon.
Dariiqo lagu horumariyo qalinka iyo xirfadaha burushka si loo bilaabo qabashada dabeecadda ee shiraacyo kala duwan ama si fudud xaashi loogu diyaariyey biyo-biyoodka. Tani artist waa Kate Kyehyun Park Iyo, marka laga reebo inay caan ku tahay sawiradeeda jardiinada dhirta, waxay leedahay xiise baris iyo kuwa kale inay ku guuleystaan ​​natiijooyinkeeda oo kale.
Bogga Instagram ee Kate Kyehyun Park waxaan ka heli karnaa taxane taxane weyn oo dhir ah iyo ubaxyo dhammaad fiican leh, iyo sidoo kale mid wanaagsan taxane ah oo casharro ah oo baro mid kasta oo ka mid ah tallaabooyinka Maxaad siinaysaa si aad u dhammaysato rinjiyeynta ubaxyadaas quruxda badan iyo kuwa jilicsan.
Waxaan ka hadlaynaa waxaad baran karto rinjiga ubax, tulips ama cacti, marka laga reebo taxane kale oo weyn oo ubax noocyadiisa kala duwan ah. Runtu waxay tahay burushkiisu aad u jilicsan yahay wuuna garanayaa sida loo siiyo taabashada saxda ah si loo qabsado raadkaas ubax ah oo u muuqda in caleemaheeda ay u dhacayaan xoogga dabaysha; sida farshaxankan iyo kuwa burushka dhaadheer ee burushku u rinjiyeeyaan shimbiraha.
Waxa ugu fiican waa taas casharradiisa waa mid aad u fudud oo cad jahwareer badan. Waxay ka kooban yihiin saddex tallaabo oo aad u baahan tahay inaad raacdo si aad u sawirto ubax kasta oo aad rabto. Sawirka ugu horreeya ee qaabka loo sawiray, ka dibna khadadka transverse iyo sawirka ugu dambeeya ee leh qaabka caleemaha si ugu dambeyntii loo sameeyo rinjiyeynta iyo sawir ubax ah.
Waanu kaa tagnay leh Instagram-kaaga maxaa loogu raac iyada oo si dhow u bartaan iyada cinwaan kasta oo ka mid ah cinwaanadaada oo diyaar u ah shabakaddan bulsheed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Farshaxanistaha reer Kuuriya ayaa talaabo talaabo u baraya sida loo sawiro ubaxyo qurxoon
4 faallooyin, ka tag taada
Ku jawaab Andrea
Caawimaad weyn maxay u tahay kuwa aniga oo kale ah, oo aan fikrad ka haysan sida wax loo sawiro!
Tatiana Velasquez dijo
Waad ku mahadsantahay inaad talaabo talaabo ah noo baraysay, sida loo barto sida loo sawiro, ma aqaano sida wax loo sawiro laakiin casharadan ayaan ogahay inaan ku guuleysan doono
Ku jawaab tatiana velasquez
Adaa mudan! Salaan :)
Thanks to this AI waxaan ka saari karnaa walxaha oo aan ku dhejin karnaa sawir aan jecel nahay
IKEA xarfaha bilaashka ah ayaa ah nooca ugu raaxada badan ee abid la abuuray